ဘုံ Programming စာမေးပွဲအမှားများ - mum မှာကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်
ဘုံ Programming စာမေးပွဲအမှားများ
သင့်အနေဖြင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုစဉ်ကာလအတွင်းသို့မဟုတ်အပြီးတွင်ရှေ့တော်၌, အခြားသူတစ်ဦးနှင့်အတူပူးပေါင်းခွင့်ပြုမထားပေ။ သငျသညျတင်ပြရန်အဆိုပါအလုပျသငျ့ကိုယျပိုငျဖြစ်ရမည်။ ကျနော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောလျှောက်ထားသူအကြားမျှဝေခဲ့ကွောငျးအဖြေတစ်ခု detect လျှင်, ငါတို့သည်စမ်းသပ်မှုဂမ်ကိုရပ်တန့်မည်ဖြစ်ပြီးပါဝင်ပတ်သက်အားလုံးလျှောက်ထားစမ်းသပ်မှုကျရှုံးလိမ့်မယ် !! ပူးပေါင်းမနေပါနဲ့ !!
မရမာကုဒ်တစ်ခုခင်းကျင်း၏အရှည်လုပ်ပါ။ ဥပမာအရှည်3တွေရဲ့ array လိုအပ်ဘာလို့လဲဆိုတော့, ပြော, သင့် program ကိုသာအရှည်3၏ Array ကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါလိမ့်သင့်ကြောင်းမဆိုလိုပါ။ သင့်ရဲ့ program ကိုမဆိုအရွယ်အစားတွေရဲ့ array ကိုကိုင်တွယ်နိုင်ဖြစ်သင့်! ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဲ့သို့အရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုပါလျှင်
 တစ်ဦး = အသစ်က int  int;
သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်မဆို I / O ကိုမသုံးပါနဲ့! သင်ကီးဘုတ်မှတစုံတခုကိုဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ် console ကိုဘာမှထွက်မရေးပါသင့်ပါတယ်။ တစ်ဦးက function ကိုယင်း၏ parameters တွေကိုထံမှ၎င်း၏ input ကိုရရှိရန်နှင့်တစ်ဦးအပြန်ကြေညာချက်ကို အသုံးပြု. ၎င်း၏အဖြေကိုပြန်လာသင့်တယ်။ အထူးသ, သင့် function ကို GUI တစ်ခု-based ပြတင်းပေါက်လျှောက်လွှာတွင်သို့မဟုတ်တစ်ဦးကို browser-based web application ကို၌တည်ရှိ၏အဖြစ်အသုံးပြုခံရနိုင်ဖြစ်ရပါမည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ function ကိုအောက်ပါထုတ်ပြန်ချက်များမဆိုကြည့်ရှုပါလျှင်ဒီတော့ကျနော်တို့ဂမ်ကိုရပ်တန့်မည်ဖြစ်ပြီးသင်သည်သင်၏အဖြေကိုမအကြွေးလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
အခြားမည်သည့် I / O ကြေညာချက်
ဒါဟာသင့်ရဲ့ function ကိုမှဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၏ရလဒ်များကိုပြသရန်သင့်အဓိကအစီအစဉ်တွင် output ကိုထုတ်ပြန်ချက်များသုံးစွဲဖို့အဆင်ပြေသည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုသင်ကသင့်ရဲ့ function ကိုစမ်းသပ်ဖို့အသုံးပြုမဆို Array ကို၏ Hard-code ကိုတန်ဖိုးများမှအဆင်ပြေတဲ့အတွက်သင့်ရဲ့အဓိကအစီအစဉ်တွင် input ကိုထုတ်ပြန်ချက်များသုံးစွဲဖို့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုစွန့်ပစ်သည်။